पोषण तत्व किन चाहिन्छ शरिरलाई ? - Baikalpikkhabar
पोषण तत्व किन चाहिन्छ शरिरलाई ?
पोषण तत्वले हामीलाई निरोगी एवं तन्दुरुस्त राख्छ । तर, हामीले खाएको सबै खानेकुरा पच्छ भन्ने छैन । जब खाना पच्दैन, त्यो विकार दिसा–पिसाबको माध्यामबाट बाहिर निस्कन्छ ।
खाना नपच्नु भनेको शरीरमा आवश्यक पोषण तत्वको अभाव हुनु पनि हो । त्यसो भयो भने, हामी रोगी हुनेछौ । अपच खानेकुरा विकारको रुपमा शरीरभित्रै जम्छ । यसले शरीरलाई विषाक्त बनाउँछ । त्यसैले स्वस्थ्य एवं निरोगी जीवनका लागि खानेकुरा राम्ररी पचाउने क्षमता हुनैपर्छ । तर, हामीले खाएको सबै खानेकुरा पच्छ भन्ने छैन । किनभने, हामीले पचाउन गाह्रो हुने खानेकुरा सेवन गर्छाैं । जस्तो कि, तारेको, भुटेको, मसलेदार, जंक फूड, प्याकेटबन्द खानेकुरा आदि ।
अर्काेकुरा, हाम्रो पाचन यन्त्र नै कमजोर भइदिन्छ । जब पाचन यन्त्र कमजोर हुन्छ, सामान्य खानेकुरा पनि पचाउन गाह्रो हुन्छ । आवश्यकता भन्दा बढी मात्रामा खाना खानु, मसलायुक्त खानेुकराको सेवन तथा गलत खानपानका कारण पाचन तन्त्रले खानालाई सही तरीकाले पचाउन सक्दैन । त्यसबाहेक, कलेजोमा रहेका इन्जाइमले सही तरीकाले काम गर्न नसकेको अवस्थामा अपचको समस्या निम्तने गर्छ । जुन निकै पिडादायक हुन्छ ।
बिहिबार, १५ कार्तिक, २०७५, दिउँसोको ०१:४५ बजे